Iza no mandany betsaka indrindra: KDE, GNOME, XFCE na LXDE? | Avy amin'ny Linux
Iza no mandany betsaka indrindra: KDE, GNOME, XFCE na LXDE?
Tena mahaliana ny fanadihadiana nataon'izy ireo tamin'ny Phoronix ary izany dia ahafahantsika mamaha ny fanontaniana iray izay nanontanian'ny maro taminareo angamba: Inona ny tontolon'ny mpitantana desktop / varavarankely noana be indrindra? Ny fitsapana natao niaraka tamin'ny malaza Phoronix Test Suite sy ny kinova farany amin'ny tontolo birao malaza dia nanome valiny mazava.
Araka ny voalaza ao amin'ny Lahatsoratra voalohany, na dia natao ho fizahana manokana aza ny efitrano fitsapana Phoronix hijerena ny fahombiazan'ny fizarana hafa, Izy io koa dia afaka manara-maso ny fanjifana ny loharano Amin'ny alàlan'ny tranomboky Phodevi (Phoronix Device Interface), izay ahafahana manangona vaovao momba ny mari-pana, ny fanjifana bateria, na ny fampiasana CPU sy GPU isaky ny tranga.
Ny fampitahana dia natao tao amin'ny netbook, ny Samsung NC10, izay nitondran'izy ireo an'io tontolon'ny andrana io tamin'ny kinova farany tamin'ny tontolo fitantanana desktop / varavarankely efatra malaza indrindra ankehitriny: GNOME 2.29.1, KDE SC 4.4.1, LXDE 0.5, ary XFCE 4.6.1.
Tao anatin'ireo andrana dia noraisin'izy ireo ny fizahana andrana roa, ary ny valiny dia mitohy hatrany na kely aza amin'ny tranga roa. Ny KDE SC 4.4.1 no tontolo iainana mando indrindra, na amin'ny fiainana an-bateria na amin'ny enti-miasa amin'ny solosaina, ary na amin'ny maripanan'ny rafitra aza rehefa mihazakazaka ireo tontolo iainana ireo.
Ny mpilalao mahay indrindra tamin'ny andrana dia ny LXDE, na dia saika nitovy tamin'ny XFCE aza izany. Ny GNOME dia tsy dia lavitra an'ireo fivoarana roa ireo, ary amin'ny ankapobeny KDE no gaga tamin'ny fahasamihafana misy amin'ireo mpifaninana aminy. Toa tokony horaisin'ireo mpandrindra KDE ity angon-drakitra ity mba hanadiovana ny fanjifana loharano amin'ny famoahana amin'ny ho avy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Iza no mandany betsaka indrindra: KDE, GNOME, XFCE na LXDE?
Mpiaro lehibe ny tontolo iainana lxde aho .. ny marina dia manana fampisehoana miavaka izy .. Manana ny kinova lihuen 4 lxde an'ny Universidad de la Plata aho. manidina ny pc-ko!
Sherpa maimaim-poana any Lemuria dia hoy izy:
Raha marina ny zavatra niainako, ao anatin'ireto fitsapana ireto no mahavita ny ratsy indrindra dia ny KDE, na dia miaraka amin'ny XFCE jiro pseudo [tena miadana amin'ny lafiny rehetra aza].
Amin'ny toerana fahatelo dia ny GNOME [ara-dalàna], ary ilay mitondra tena tsara indrindra, dia LXDE. Ny iray hafa izay mitondra tena tsara ihany koa dia ny Fluxbox.
Valiny tamin'i Sherpalibre of Lemuria
Tena mahaliana! Misaotra amin'ny vaovao!
J. Miguel Rivas dia hoy izy:
chanfle men ary alaiko ny xfce D:
Soa ihany aho fa tsy nametraka azy xD
Valiny tamin'i J. Miguel Rivas
Sintomy ny andianao tianao amin'ny Torrent Episode Downloader (TED)
Navoaka ny Openshot 1.1